I-Spotify izokwazisa umdlali wemoto kule Aprili 24 | Iindaba zeGajethi
I-Spotify izokwazisa umdlali wemoto kule 24 ka-Epreli ezayo
URuben inyongo | | Abadlali, Ukusasaza
Nge-24 ka-Epreli, u-Spotify uceba ukubamba umsitho. Nangona kungekho zindaba zichanekileyo malunga nenkampani enomdla wokuthetha ngayo, ngokucacileyo Isizathu iya kuba kukubonisa uluntu iqela ebelisebenza kulo kwiinyanga ezidlulileyoUmdlali ozimeleyo wemoto oza kusebenzisa ngayo inkonzo yakho.
I-Spotify iyaqhubeka nokufumana umhlaba kwicandelo lomculo kwi umchachazo. Nangona iApple Music okanye ezinye iinkonzo zisemva, inyani yile Uncedo lovulindlela wolu hlobo lweqonga liyabonakala. Umculo uthatha naphina kwaye imoto yenye yeendawo apho, ukuba ungumrhumo premiumNgokuqinisekileyo uya kusebenzisa ngakumbi. Ngoku, ungathini ngaphandle kweselfowuni ukumamela uluhlu lwakho? Ungathini ukuba uye wahambisa nge efowuni ukulawula iingoma, ivolumu, njl. Ewe, kubonakala ngathi ezi zezinye zezinto esinokukunika zona malunga nento enokufika ngomhla wama-24.
Malunga nenyanga enesiqingatha eyadlulayo, abanye abasebenzisi bafumene - ngempazamo- intengiso ebonelela ngesixhobo esitsha esiza kungenisa umrhumo wenyanga. Izixhobo ekubhekiswa kuzo yile ihamba nale nqaku kwimifanekiso. Ukongeza, Ixabiso lomrhumo liya kuba yi- $ 12,99 kunye nentlawulo ye- umchachazo umculo ezifana nezixhobo eziqeshisayo. Ewe kunjalo, ngaphandle kokuba umsebenzisi wamkele ubuncinci bokuhlala iinyanga ezili-12.
Okwangoku, okoko esengozini bonisa ukuba i-Spotify khange ibonelele ngeempendulo kwimibuzo yabo, nangona beyazi imisebenzi ebonelela ngeeprojekthi zekhompyutha. Kwelinye icala, Spotify unomdla nakwimiyalelo yelizwi eyaziwayo; Omnye umsebenzisi utyhile kwi-portal ukuba ufumene esinye isipho-ngexabiso eliphezulu- kodwa oko kwavumela ukudityaniswa kwe-Alexa yeAmazon. Kuyabonakala ukuba, iSpotify yayiya kuba yenye yeenkampani ezaziza kuphehlelela esinye isithethi esidibeneyo kwixesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Abadlali » I-Spotify izokwazisa umdlali wemoto kule 24 ka-Epreli ezayo
UMophie usungula isiseko esitsha sokutshaja ngaphandle kwamacingo esisi-10W